Manchester United Oo Heshiis Shaqsi Ah La Gaadhay Mishiinka Khadka Dhexe Bruno Fernandes Iyo Mushaharka Uu Qaadan Doono Oo Lasii Ogaaday - Gool24.Net
Manchester United Oo Heshiis Shaqsi Ah La Gaadhay Mishiinka Khadka Dhexe Bruno Fernandes Iyo Mushaharka Uu Qaadan Doono Oo Lasii Ogaaday
January 12, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Manchester United ayaa heshiis la gaadhay laacibka khadka dhexe uga ciyaara kooxda Sporting Lisbon ee Bruno Fernandes.
Wakiillo ka socda Sporting Lisbon ayaa la sheegay in ay ku sugan yihiin magaalada Manchester oo ay wada-xaajoodyo kula yeelanayaan maamulka Red Devils, si ay iskula meel dhigaan heshiiska ay kula kala wareegayaan kubbad-sameeyaha Fernandes oo tilmaamo uu bixiyey loo turjumay inuu ku macasalaameeyey jamaahiirta kooxdiisa.
United ayaa si aad ah uga shaqaynaysa in bishan January ay hesho laacibkan khadka dhexe si uu ugu buuxiyo booska xiddigaha dhaawaca ah ee Paul Pogba ama Scott MacTominay, waxaanay wararku sheegayaan in maalaha soo socda uu tijaabada caafimaadka u mari doonno Red Devils.
Wariyaha caanka ah ee u dhashay waddanka Talyaaniga ee Nicolo Schira ayaa sheegay inuu helay xogta heshiiska ay gaadheen Manchester United iyo Bruno Fernandes, waxaanu xusay in maalmaha soo socda la dhamaystiri doono qobbada ka hadhsan heshiiska.
Nicolo Schira ayaa bartiisa Twitterka ku qoray: “Bruno Fernandes waxa uu Manchester United la gaadhay heshiis shaqsi ah oo soconaya illaa 2025-ka, mushaharka sannadkii uu qaadanayaana wuxuu noqon doonaa €6 milyan sannadkii marka uu ka tago Sporting.”
Wariyaha oo sii faahfaahinaay heshiiska ay Manchester United la gashay Fernandes, waxa uu qoraalkiisa sii raaciyey: “Labada kooxood ayuu hadda wada-hadalku u socdaa, waxaana heshiiska lasoo gabogabayn doonaa maalmaha soo socda.”
Tababaraha kooxda Sporting Lisbon, Silas oo wax laga weydiiyey heshiiska la sheegay in Manchester United ay la gashay laacibka kooxdiisa ee Bruno Fernandes, ayaa waxa uu sheegay in uu ogyahay inuu ciyaartoygiisani yahay xiddig weyn oo ay kooxaha oo dhan radinayaan, hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday inuu si toos ah uga hadlo arrintan.